Ezi ude mmiri maka mmanu mmanu
Mma nke nwanyị Nlekọta ahụ
Oge na-efe efe n'enweghị ihe ọ bụla, akpụkpọ ahụ agaghị echere anyị. Na-agbado, ị na-eji ụda olu na ịdị ụtọ na-achọ ọ bụla nke abụọ. Otu n'ime ndị na-enyereghị aka ma na-enye aka na nlekọta nke ahụ bụ ude mmiri.
Ọtụtụ ndị nnọchianya nke ọmarịcha ọkara nke mmadụ nwere akpụkpọ anụ. Ya mere, ọ dị ha mkpa ịhọrọ ezigbo ude mmiri maka akpụkpọ anụ. Gịnị mere mmiri mmiri? N'adịghị ka nnukwu nhazi nke ude ahụ, mmiri maka mmanu akpụkpọ anụ na-adọta mpempe akwụkwọ ya ma jiri nwayọọ nwayọọ na-edozi ya. Ọ dị mfe ma jiri akụ na ụba mee ihe, ọ naghị ahapụ ọdịdị na uwe, nke anụ ahụ ghọtara. Nkoo na anu ugbo nke anu aru na-adighi nma. N'ihi ọdịnaya kachasị nke mmanụ na-ahụ maka mmanụ, ngwaahịa ndị a adịghị etinye aka na poos ma kwe ka anụ ahụ na-eku ume ọbụna n'okpuru uwe. Ihe onwunwe nke lotions dị ezigbo mkpa maka ndị nwere akpụkpọ anụ. Chọpụta ngwá ọrụ gị ma chọpụta oge ị ga - eji mee ihe, ị maara ụdị na mkpa nke akpụkpọ ahụ.
Ịga lotions maka mmanu mmanu
- Degreasing na igbochi ọdịdị nke ọhụrụ inflammations.
- Nri na nlekọta ọrụ.
- Akwukwo aja di nwayo.
- Autosunburn, ụtụtụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
- Iji belata ntutu isi.
Iji mee ka mmiri a na-arụ ọrụ kachasị ike ma mịa mkpụrụ, ọ dị ezigbo mkpa ịchọta ihe ndị dị na ya nke nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge. Mgbe ahụ, nkwụsị ahụ agaghị eme mgbalị na-adịghị mkpa, ahụ anaghịkwa ejupụta n'ahụ ahụ. Dị ka ndị mmepe nke ụdị eji mara nke ọma, ihe ndị a nke ihe ndị sitere n'okike n'otu oge na-enwe ihe ngwọta na ọtụtụ ọrụ ngwa-ngwa.
Aloe vera - moisturizing, na-elekọta ma na-emekarị otu ọgwụgwọ nke microcracks na ọnyá, resorption nke scars na radiance anya mgbe ngwa.
Mmiri nke almọnd - nchịkọtaghachi na mweghachi nke mmiri nke akpụkpọ ahụ.
Akwukwo butter - ime ka aru di ala, belata onu ogugu.
Jojoba mmanụ - dị ka ebuli elu (na-agbatị ngwa ngwa) na hypoallergenic.
Shea butter - na-enye anụ ahụ nri, mgba na ọdịdị nke wrinkles na ọ bụ nanị ihe na-enweghị ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ dị nro.
Ndị antioxidants na-emepụta ihe (green tii, soy, oroma, mkpụrụ vaịn na ihe ọ bụla tomato) - nyere aka ịgbake site ná nrụgide ma ọ bụ ọrịa ndị siri ike.
Acid acid (ascorbic, salicylic, lemon) ya na mmiri Osimiri Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ vitamin na-arụsi ọrụ ike (A, E, F na P) na-edozi akpụkpọ ahụ, gbanwee ememe ndị ọhụrụ ma saturate ahụ dum na oxygen.
Ulo ogwu na-adighi nma na-esi ísì uto nke ihe ndi na-ewu ewu na mposi. Ha abụghị naanị moisturize akpụkpọ, ma ha na-enyekwa gị aka ịnụ ísì ogologo ụbọchị dum. Akwụsịla uwe na uwe, n'adịghị ka onye ahụ na-eto eto na nke na-asọ oyi na aromas, nwere mmegbu dị njọ na nke na-adịghị mma. Maka mkpughe nke palette zuru oke, ihe ndị dị otú ahụ na-esi ísì ụtọ na-akwado iji uzuoku ma ghara ịgwakọta lotions na mmanụ si n'aka ndị na-emepụta ihe dị iche iche.
Nzuzo nke lotions maka mmanu mmanu
Nke mbụ, tinye nsị kwesịrị ịdị ọcha, ọkacha mma mgbe ịsachara mmiri ma ọ bụ ịsa ahụ. Ọ bụ n'oge a, n'agbanyeghị ụbọchị ma ọ bụ abalị, edemede mmiri, mmiri mmiri ntan na ihe nkwụnye aka gị n'okpuru anụ ahụ na-enwe obi ụtọ ga-anakwere emulsion ọkụ.
Nke abuo, a na-achọkarị nsị dị iche iche maka akụkụ dị iche iche nke ahụ. E kwuwerị, ọ bụghị mgbe niile otu ngwá ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ma na-edozi ọrụ ndị dị mkpa n'elu ala ahụ dum. Dịka ọmụmaatụ, maka ụkwụ na ikuku, nnukwu akụkụ ndị dị na jelii mmanụ ala zuru okè. Maka olu - ihe kachasị elu airy na mmanu mmanu moisturizing. Maka mpaghara underarm - ihe ndị na-esi ísì ụtọ na obere ego nke okpukpo ntụ.
Nke ato, akpụkpọ ahụ anyị na-eji ngwa ngwa ma na-enyocha ihe ịchọ mma. Ya mere, mmiri nke kachasị na-egbu ahụ maka ahụ bụ ọnwa isii ma ọ bụ otu afọ. N'ikpeazụ, ngbanwe nke mmiri ahụ na-echebara ọnọdụ ihu igwe n'uche. N'oge oyi, ọ ka mma iji mmanụ nri. N'oge okpomọkụ, moisturizing na nchedo site na ultraviolet dị mkpa. Na mgbụsị akwụkwọ na mmalite oge opupu ihe ubi, họrọ oke nsị owuwu nke na-egbochi akpụkpọ ahụ site n'arụmụka na esemokwu. Ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu akpụkpọ anụ ahụ, mgbe ahụ, i nwere ike ime ihe ọhụụ nke ụwa niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nlekọta na ọgwụgwọ zuru oke, ị ga-achọ mkpachi ọgwụgwọ pụrụ iche.
- Echiche nke ihe ịchọ mma na akpụkpọ ahụ na-akpata mmetụta ndị na-adịghị mma nke ihe ọ bụla ọzọ na-enweghị ike ịkọwapụta? Ọ ka mma ime n'enweghị ha ma ọlị. Ọ bụrụ na ịchọrọ moisturize, gbaa ume ma ọ bụ ụda akpụkpọ ahụ, mgbe ahụ, aromatic baths, mmiri gels ma ọ bụ wraps ga-eme.
- N'agbanyeghi ngwa ngwa onye na-etinye uche ya abụghị mmiri, etinyela ya ozugbo tupu ị apụ n'ụlọ. Karịsịa moisturizing ogige, na ọbụna a ok oyi akwa. Tinye obere oge, zere inwe obi ụtọ na-enweghị isi.
- Ị nweta ọgwụgwọ zuru ụwa ọnụ maka ahụ dum? Debe ya n'anụ ahụ, na-ezere n'olu na ihu ihu. A na-akpọkarị nsị maka ihu na akpụkpọ ahụ.
- Ọ bụrụ na a gaghị etinye mmiri mmiri n'ahụ iji dochie ihe ndị na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na mmanụ mposi, mgbe ahụ, ísì ya ekwesịghị ịbụ nkọ, doro anya ma na-egbochi ndị ọzọ niile. Cheta, nnukwu ihe na-esi ísì ụtọ na ogige ndị aromatic bụ ndị na-enwe mmetụta nrịanrịa na ihe oriri na-enweghị atụ.
- Ọchịchịrị oge okpomọkụ maka ọdịdị ahụ kwesịrị ọ bụghị nanị na iji moisturize, ma na-emekwa ka ume ọhụrụ. Ma ọ bụghị ya, ị ka ga-enwe mmetụta nke abụba na ike.
Emela ihe na-ezighi ezi n'ịhọrọ ezigbo ude mmiri maka akpụkpọ anụ. N'ihi àgwà ya dabere na mma na ahụ ike nke akpụkpọ ahụ anyị.
Ngosiputa Ngwa na kọfị
Cellulite na-arụ ọrụ
Nsogbu nke SPA-usoro
Kedu ka esi tufuo akara na afọ mgbe amuchara nwa?
Nlekọta aka: bat, nkpuchi
Kedu otu esi ahọrọ onye na-elekọta tanning kwesịrị ekwesị
Nri chocolate egbugbere ọnụ
Ọgwụgwọ na kpokọtara njirimara nke quartzite
Stuffed pancakes, a na-atọ ụtọ na efere maka nri kwa ụbọchị na a festive okpokoro, Ezi ntụziaka na foto
Mkpụrụ cutlets si squid
Azụ na-egbuke egbuke
Akwukwo erimeri na rum na mkpuru
Shish kebab na aerogril
Buckwheat na ọkụkọ dị iche iche
Iche ụmụ jujube ụmụaka bụ ihe na-emerụ ahụ
Yellowness abụghị ahịrịokwu maka ntutu ntutu isi: Ezi ntụziaka maka shampoos kachasị dị irè
Enwere ike ịhụ ọhụụ na ụjọ?
Carrots na Korean (Carrots Carrots)
Oge mgbụsị akwụkwọ - ihe ngosi maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị, akara 5-8 na ụlọ akwụkwọ elementrị. Ịgba egwú, ekele na mgbidi ụlọ akwụkwọ maka oge mgbụsị akwụkwọ
Ndị enyi nke Zhanna Friske chọrọ ime ka Dmitry Shepelev na ndị ya na-abụ abụ
Mmetụta nke ibi ndụ na ahụ ike mmadụ
Hair na nsogbu ha
Achịcha na nkere na caramelized